सन्तोष देउजा बिरामी परेपछि आकस्मिक रुपमा भर्ना गरेर उपचार – Gorkhali Dainik
सन्तोष देउजा बिरामी परेपछि आकस्मिक रुपमा भर्ना गरेर उपचार
April 22, 2021 224
चर्चित युट्युबर सन्तोष देउजा बिरामी परेपछि आकस्मिक रुपमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको छ । सन्तोषलाई गम्भिर समस्या देखा परेसँगै उनको उपचार सुरु गरिएको उपचारमा संगल्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । आखिर के भएको हो सन्तोषलाई ? पत्निले रुँदै भनिन् छिटो निको भएर घर फर्किनुहोस् मेरो भगवान्
अञ्जु पन्त विबाहपछि निकै खुशी देखिएकी छिन् । पत्नि अञ्जु पन्तसँथ पति थिर पनि निकै खुशी हुँदै खुलेका छन् । यो जोडीको बिचमा भगवान् बनेर अञ्जुकी छोरी परितोषिका देखा परेकी छिन् । अञ्जु र थिरले बनाउको टिकटकमा परितोषिकाको हिरोको रुपमा आगमन भएको देखिन्छ ।
जुन टिकटक अहिले सामाजिक संजालमा औधी भाइरल बनिरहेको छ । अञ्जुले केही वर्षको प्रेमपछि प्रेमी थिरसँग क्रिश्चियन परम्परा अनुहार धुमधामले नै विबाह गरेकी हुन् । यसअघि आमा अञ्जुले थिरसँग विबाह गरेपछि छोरी एक्लै भएको भन्ने खबरलाई झुट सावित गर्दै अञ्जुले छोरी पनि आँफु सँगै बस्दै आएको र सबैजना खुशी भएको एक अन्तरवार्तामा उल्लेख गरेकी छिन् ।
Prevमुख्यमन्त्रीलाई ‘ब,ला,त्कारी’ भनेपछि एमाले मुख्यालयबाट बालिका खड्का प,क्रा,उ
Nextनायक खतिवडासंग माफी माग्दै मिडियामा आइन लक्ष्मी गदाल (भिडियो)
इकोनोमिकगृहपृष्ठ घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज प्रतितोला ? घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज प्रतितोला ?